UpSnap: Inotengeka Nhare, Yemunharaunda, uye Kwenharaunda Inotarisirwa Kushambadzira | Martech Zone
UpSnap: Inotengeka Nhare, Yemunharaunda, uye Kwenharaunda Inotarisirwa Kushambadzira
Muvhuro, Nyamavhuvhu 3, 2015 Muvhuro, October 12, 2015 Douglas Karr
UpSnap inopa nharembozha yekushambadzira inopa zvinopfuura bhiriyoni rimwe chete pamwedzi. Uye kuburikidza nehukama hwavo nemamwe masayiti makuru, ivo vanokwanisa kuratidza kushambadzira kune wechitatu-bato netiweki pamwero weanopfuura mabhiriyoni zana ekuratidzira pamwedzi UpSnap inoita kuti iwe ugone kunongedza vatengi vari padyo nebhizinesi rako. Kamwe kana mushandirapamwe wako uchinge wararama, UpSnap icharatidza nharembozha yako kune vatengi vari mukati mamaira mashanu-mamaira. Targeting inowedzera kunze nekunze kuwanikwa kwetraffic uye nharaunda yaunoda.
UpSnap inopa zvese kubva pane dhizaini dhizaini kusvika pakuzivisa:
Mushure mekusaina-gamuchira, gamuchira kufona kubva kuUpSnap Mobile Nyanzvi kuti upedzise ruzivo rweyako nhare yekushambadzira.
UpSnap ichagadzira uye kodhi iyo yekumisikidza peji uye banner kushambadzira kune rako bhizinesi. Zvese zvaunoda kuti uite kuongorora uye kubvumidza hunyanzvi.
Shambadziro yako inozoratidzwa kusvika makumi maviri neshanu pamwedzi pamazana emasaiti epamusoro uye maapplication e $ 20,000 chete / mo chete.
Kutanga kugamuchira mafoni, mukushanya kwezvitoro uye nezvimwe. Uyezve, unogona kuongorora mashandiro emushandirapamwe wako nemwedzi wega wega analytics report.
UpSnap inopa yakasimba kushambadzira inoshumirwa zvichienderana nenzvimbo, muparidzi, nharembozha, uye mutengi chimiro.
SNAPalytics inopa yakakura data analytics kunyangwe vashambadzi vadiki. Nzwisisa maitiro evashandisi uye ita chaiyo-yenguva mushandirapamwe kuyera kunongedza vatengi pane imwe nguva pavanenge vakagadzirira kuita.
Tags: nzvimbo yakanangwakushambadzira kwemunonzvimbo-based advertisingnharembozha yekushambadziranharembozha geographic adsnhare mbozha dzemunharaundanhare yakanangwakumusoro
Maitiro Ekugadzira Yemagariro Media Kushambadzira Karenda
Kushaikwa kweMhinduro dzeMagariro kuri Kukuvadza Bhizinesi Rako
Gumiguru 11, 2016 na12: 19 PM
Kambani yedu inodyara muyedzo package neUpsnap. Kupedza kutambisa mari nenguva. Hapana mhinduro, hapana inotungamira, hapana mishumo.
Usatambise nguva yako.